I-Sítio do Amaral-Idama lokuqubha kunye neziko - I-Airbnb
I-Sítio do Amaral-Idama lokuqubha kunye neziko
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguFilipe
Indawo engaphakathi eSão Roque, kwindawo ezolileyo kakhulu. Abamelwane abambalwa baqelelene. Indawo entle yokucima unxibelelwano kunye nokunxibelelana nendalo ngelixa usonwabele ixesha elisemgangathweni kunye nosapho kunye nabahlobo. Ingqongwe lihlathi lemveli, ityelelwa ziinkawu, iimarmosets, iitoucans, iisquirrels kunye namaxhama. Idama lokuqubha, i-barbecue, i-oveni ye-pizza, isitovu seenkuni, indawo yomlilo. Indawo yokuhlala elula kodwa epholileyo.
Indlu enkulu enamagumbi okulala ama-4, iisuti ezi-2, amagumbi okuhlambela ayi-2, indlu yangasese, ikhitshi, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela, i-mezzanine kunye neziko. Ikwanayo nedama lokuqubha kunye nebarbecue. Indawo ebanzi "eluhlaza".
Indawo ezolileyo kwabo bafuna ukonwabela usapho okanye bahambahambe ecaleni kwendlela yeWayini. Indawo eyonwabisayo yokulungiselela iibarbecues kunye neepizza kunye nosapho kunye nabahlobo ...
ISão Roque ikwabonelela ngemisebenzi eliqela efana nokukhwela ihashe, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika, izikhephe zokuloba kunye nokhenketho lweendawo zokuthengisa iwayini ukuze ungcamle iiwayini ezimnandi kunye neebhiya, apho unokungcamla ukutya okugqwesileyo kommandla kunye nezitya zesiPhuthukezi nezaseTaliyane. Konke oku kwenza oku kuhlala umzuzu okhethekileyo ...
Singaphantsi kweekhilomitha ezi-5 ukusuka kwindlela yokufikelela kwiindawo zewayini kunye neendawo zokutyela.
Kufuphi ukuya kwi-5km ukusuka e-Estrada do Vinho (malunga nemizuzu eyi-15 ngemoto).
Ndizakunikezela ngokwam izitshixo ndikubonise iindawo zokuhlala. Ndingadibana nawe embindini weSão Roque kwaye ndikukhokelele kwindawo.